> Resource> iPhone> otú nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Nokia
M na-achọ mbupụ kọntaktị echekwara na iPhone n'elu SIM, ma ọ bụ mbupụ ha na-enweta ha m Nokia, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na ekwentị ọzọ karịa ihe iPhone. PS: Ana m agba ọsọ Windows vista!
Ọ bụ ezigbo mfe nyefee kọntaktị site na iPhone ka Nokia, ọ chọghị nwetụrụ mgbalị. All na i kwesịrị ime bụ ịgbalị a otu-click ekwentị transfer ngwá ọrụ - Wondershare MobileTrans. Na ngwá ọrụ a, na ị na-enwe ike nyefee kọntaktị niile na gị iPhone si ebe nchekwa, na ndị na na iCloud, Yahoo, Exchange na ndị ọzọ na ndekọ Nokia na ekwentị n'ime otu Pịa. Ọzọkwa, ọ bụ a virtus-free ngwá ọrụ, otú i nwere ike na-eche free iji ya.
Download a bara uru ekwentị transfer ngwá ọrụ na nwere a-agbalị.
Cheta na: ịrịba ama na akaụntụ, dị ka iCloud, Exchange na Hotmail, na gị isi iyi ekwentị, mgbe ị chọrọ nyefee ha na ebe nchekwa ekwentị na kaadị.
Mfe nzọụkwụ idetuo kọntaktị site na iPhone ka Nokia
N'okpuru ebe a bụ mfe nzọụkwụ banyere otú Detuo gị iPhone kọntaktị na Nokia na 1 Pịa. Ugbu a, na-ahapụ 'lelee nzọụkwụ ọnụ.
Nzọụkwụ 1. Launch MobileTrans na kọmputa mgbe echichi
Na mmalite, wụnye na ẹkedori MobileTrans na kọmputa. Bụ isi window-egosi na n'elu na kọmputa na ihuenyo. Họrọ ekwentị na ekwentị Nyefee mode.
Cheta na: Wondershare MobileTrans bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na nza nke Nokia ekwentị ma ọ bụ mbadamba na-agba ọsọ Symbian 40, Symbian 60 na Symbian ^ 3.
Nzọụkwụ 2. Bilie gị iPhone na Nokia ejikọrọ
Jiri USB Gịnị jikọọ ma gị iPhone na Nokia ekwentị na kọmputa. Dị ka ị na-ahụ, gị iPhone e gosiri dị ka isi iyi ekwentị na ekpe ebi ndụ, na Nokia ekwentị gosiri na nri, aha ya bụ ebe ekwentị. Ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ na-abaghị uru kọntaktsị na Nokia, ị nwere ike pịa "Clear data tupu oyiri". Site n'ime nke a, niile ugbu a kọntaktsị na gị Nokia ga-ehichapụ tupu-azọpụta Nokia kọntaktị.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee kọntaktị, music na foto site Nokia ekwentị iPhone, ị nwere ike pịa "tụgharịa" na-eso yiri nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 3. Nyefee iPhone kọntaktị na Nokia
Mgbe ahụ, pịa "Malite Copy". Kọntaktị transfer usoro amalite. Na mmapụta window, ị nwere ike ịlele kọntaktị transfer usoro. Mgbe ọ mere, ị pịa "OK" rụchaa nyefe.
Lee, ọ bụ ya mere mfe ịkwaga kọntaktị site na iPhone ka Nokia na enyemaka nke MobileTrans. N'ezie, MobileTrans na-ahapụ gị nyefee kọntaktị, ozi ederede, foto na music si Nokia ekwentị ma ọ bụ mbadamba ka Android, ma detuo Android kọntaktị azụ Nokia. Ke adianade do, ọ na-enyere gị ịkwaga data n'etiti iPhone, iPod na iPad na Android na ala.
Gbalịa a na ekwentị transfer ngwá ọrụ mbupụ kọntaktị site na iPhone ka Nokia.
4 ụzọ nyefee SMS iphone ka android